Ku hagaaji LibreOffice si ay si fiican ula jaanqaado Microsoft Office | Laga soo bilaabo Linux
@Jlcmux | | Noticias, Lagu taliyay, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Ma jiro qof qarsoodi ah Microsoft Office Tan iyo markii ay soo saartay 2007 Service Pack 1, waxay bilowday inay taageerto qaabka ODF 1.2 si loola jaan qaado qolalka kale ee xafiiska. (Xafiiska Libreer, Xafiiska Furan) iyo noocyada 2010/2012/2013 waxay u sameysaa si waddaniyan ah.
Laakiin markaa maxaa isweydaarsi badani u jiraa?
Waxay dhacdaa in Libreoffice uusan isticmaalin qaabka 1.2. Waxay adeegsaneysaa 1.2 (Dheeraad ah) oo taageeradeeda aaney ka jirin Xafiiska waana sababta ay dhibaatooyinka u jiraan.
Sideen u qaabeeyaa?
Waan furannaa Qoraa Libreoffice » Tools » fursadaha » Xamuul / Keydso - Guud.
Qaabka qaabka ODF. Waxaan dooranaynaa 1.2 iyo MAYA 1.2 Kordhiyay ama mid kale.
Qaabkan iswaafajinta udhaxeysa MS Office iyo LibreOffice wax badan ayey ka horumarin doonaan dhanka iswaafajinta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Ku hagaaji LibreOffice si ay si fiican ula jaanqaado Microsoft Office
Waan isku dayi doonaa, fiiri sida ay wax noqdaan. Waa wax xiiso leh, had iyo jeer waxay i siisay dhibaatooyin iswaafajin ah mana aanan ogeyn sababta. Waxaan rajeynayaa in tan la xaliyay. Waxay la macno noqon laheyd ereyga Dual-boot oo leh Windows hehehe.
Oo sifiican ayey ula shaqeyn doontaa barnaamijka 'Impress'?
Oo ku qor, miyaanay mar dambe lagama maarmaan noqon doonin in lagu kaydiyo M $ XP-2003-2007 laakiin ODF?
Qofkasta oo feyl ku qaata ODF oo ku furo M $ 2010, ma awoodi doonaa inuu fiiriyo oo si sax ah u daabaco mise wuxuu lahaan doonaa safafka ugu dambeeya ee mararka qaarkood u muuqda "la soo raray", taasoo sababi doonta cutubka bogga xiga ka bilow dhamaadka kii hore?
Hadday shaqayso ... Way yaraan lahayd in la sagootiyo W $ waxaan seegi lahaa IDM, MiPony, Outlook iyo Nokia Suite ... oo go'an in ... Chao Wincuelgues 🙂
Xafiiska ayaa qaban kara ODF: Qodobka ayaa ah in kaliya qaabka 1.2 ee iswaafajinta buuxda ... Haa, waxay lashaqeysaa dhamaan xafiiska xafiiska. Waxa kale oo aad ka maamuli kartaa Doc iyo Docx Libreoffice.
FIIRO GAAR AH: Muuqaalka = Thunderbird ama Evolution.
Hagaag, kadib waxaan iskudayaa ikhtiyaarkaas netkeyga aan ku rakibey Pear Linux,
FIIRO GAAR AH: Thunderbird waxaa ka maqan xulashada kalandarka oo Evolution-ka ma shaqeynayo marka laga reebo hal emayl oo waxaan hayaa dhowr koonto, sidoo kale midkoodna ma habeyn kartid saxiixyada, hal iyo mid taagan. Waxaan horeyba u tijaabiyey Kmail sidoo kale waana musiibo.
Beenta dhammaan beenta. Evolution-ka waxaan ku leeyahay 2 xisaab midna mid ka mid ah oo leh cinwaankiisa oo waxaan wax ka beddelay saxiixyada labadaba.
Waa run hubaashii ... ma aqaano sida aad ku sameyn laheyd Evolution laakiin waxaan u rakibey si aan u hubiyo oo xitaa aniga ima bilaabeyso, daaqada lagu daro xisaabta ayaa soo baxeysa wayna xirmeysaa wayna xirmeysaa, waxaan isku dayay dib u rakibid iyo ma shaqeyneyso, ugu yaraan intaan ii oggolaaday inaan ku daro akoon, hadda haddii aysan jirin. 🙁
Anigu waxaan ahay taageere libreoffice, weligay ma rakibo furitaan, ubuntu iyo debian midna, cashar wanaagsan oo wanaagsan oo ay wanaagsan yihiin inay jiraan dad u baahan qalabkan aniga oo kale. Farxad
Waa hagaag ... ma xuma ... laakiin waxaan u maleynayay inay ka hadlayaan hagaajinta iswaafajinta * .doc feylasha ee libreoffice ... ama wax la mid ah ... Waxaa soo baxday in tani ay tahay waxa ugu caansan halkan , inay kuu soo diraan doc oo aad nolol ku raadiso waxaad haysato (Libreoffice in my Debian / Testing) ...
Ku jawaab xfce
Taasi waa qayb ka mid ah Talo cusub. Waxaan kugula talinayaa inaad had iyo jeer haysato nooca beta-kii ugu dambeeyay ee Libreoffice maanta ee LibreOffice 3.6.4 rc1 (2012-11-17)
Waxaan kugula talin lahaa inaad ilaalisid xaalada ugu dambeysa, xaaladdan LibreOffice 3.6.3
maxaa yeelay haysashada beta, waxaad ka haysato noocyadii hore way iska indhatireysaa waana inaad dib u qaabeysaa markasta oo aad isticmaasho beta.
Waa inaad caddeysaa in tilmaantani shaqeyneyso dabcan aad baad ugu mahadsan tahay wadaagistaada! 😀
Hagaag ... Anigu mar dambe ma haysto dhibaatooyin is-waafajin, waan ku salaamayaa tan iyo markii ugu dambaysay ee Winbugs boot. Ka eeg Fedora.
Sidee fiican. Ma isku dayday Doc iyo Docx oo adeegsada Xml? Waxay u shaqeysaa si qumman. nabad gelyo Dabaysha Kuwa u adeegsada oo keliya xafiiska otomaatiga.
Runtii waxaan ula dhaqmaa sida gardarrada ah ee kuwa i dhaleeceeya sida ay aniga igu sameeyaan oo kale… madaxkeygu wuxuu iigu soo diraa waxyaabo .docx (wuxuu adeegsadaa Office 2012) waana aqriyaa oo waxaan ku toogtaa ODT
Maxaan ugu noqoneynaa kuwa aan wax ka badalno? haddii aad rabto iswaafajin dheeraad ah ... inaad xafiiska ku dhigto ruqsadda GPL xD
haha Weligay waxaan doonayay inaan ku sameeyo taas shaqooyinka U. Laakiin waxaan doorbidaa inaan noqon bartilmaameedka militariga ee macallimiintayda.
Waxaan si fudud u dhoofiyaa waxaan u baahanahay inaan la wadaago dadka kale (Waxaan u dhoofiyaa PDF) iyo voila 😀
Shaqo labanlaab ah laakiin maxaan qabanaa, ilaa iyo inta nacabku uusan furi karin ilihiisa, waa inaan sii wadnaa iyadoo kuxiran waxa inta badan dadka indhoolayaasha ah ay isticmaalaan oo aaminsan inay mashiinadu shaqeyn doonin W $ la'aantiis. 🙂
Waxaan kaliya sameeyay 2 tijaabo oo aan qaaday feyl lagu sameeyay .doc oo aan u keydiyay sida .odf iyo markaan furayo M $ Off2010 ma awoodid; Waxaan arkaa calaamad yar oo oraneysa:
Faylka 'Test.odt' lama furi karo maxaa yeelay dhibaatooyin ayaa ka jira waxyaabaha ku jira.
Kadibna calaamad kale oo oraneysa:
Ereyga waxaa laga helay waxyaabo aan la aqrin karin oo ku jira Test.odt Ma rabtaa inaad soo kabsato waxa ku jira dukumintigan Haddii aad ku kalsoon tahay isha dokumentigan, guji Haa.
HAA ayaan siiyaa oo sifiican ayey ufurtaa laakiin goobo badan ayaa lumay, sida liisaska buuqyada iyo baaragaraafyada bilowga ah ee bogagga qaarkood waxay aadaan sadarka ugu dambeeya kuwa kale. Ka dib, marka la xidhayo, waxay i waydiinaysaa inaan u keyddiyo dukumintiyada Document-1, taasi waa, waxay iloobeysaa ODT.
Iswaafajinta macnahaas kuma baxeyso .. Haddii ay tahay .doc waxaad ku keydinaysaa .doc ka socdaa libreoffice ..
Aqoontaada iyo weydiisashadaada iftiin kuwa naga mid ah ee doonaya inay wax bartaan (waa inaan barnaa kuwa aan aqoon) sida ugu fiican ee lagu badbaadin karo (marka laga reebo qaabka M $ -XP-2000-2003) a dukumiinti lagu sameeyay Ku qor kuwa adeegsada M $ 2007 ama 2010 fur kuna akhri adigoon wax kale samaynin oo nuxurkaagu aamin yahay, bilaa jabis khadka, khaladaadka rasaasta, sawirada khaldan, iwm.
Halkan waxaa ah hage wanaagsan oo lagu hagaajin karo libreoffice. Farxad
Hadday hage wanaagsan tahay. laakiin waa in la hagaajiyo xawaaraha sida barnaamijka oo kale. Tan waxaa loogu talagalay waafaqid ...
Laakiin si siman u ansax ah
Haddii iswaafajintu hagaagto, oo wiilku miyaan u baahday maxaa yeelay iyada oo taasi jirto ayaa qof kasta oo xafiiskayga ka mid ahi wuxuu adeegsadaa Xafiiska waana hawl ku habboon in la dejiyo
Waad salaaman tahay, waddani.
Casharradaadu marwalba way ku habboon yihiin shaqadayda. Haddii aad hayso talooyin dheeraad ah si aad u horumariso LibreOffice, fadlan la wadaag!
Aad u fiican, aad ayaad u mahadsan tahay, isbeddel iyo imtixaan.
Waxaan tijaabin doonnaa sida ay ula dhaqanto dukumiintiyada, si aan u qaadno baaritaanno ¡¡¡¡¡
Aad baad u mahadsan tahay, khiyaanadan yar netkeygu mar dambe ma sii laalaado mar kasta oo ay docx ii soo diraan, waxaad tahay mid weyn!
ufff mahadsanid waxay ahayd caawimaad weyn! 🙂
Laakiin inkasta oo xafiiska MS uu horeyba u haystay taageerada ODF, ma haysto taageero buuxda, waxaa jira astaamo badan oo uusan taageerin.
Eva Light Samperio dijo
Waxaan rabaa inaan u haajiro Elemantary Os, laakiin dhibaatadu waxay tahay inaan haysto sida 500 Excel iyo faylasha faylasha. Wixii aan halkan ku arko, kor ayaan ugu rogi karaa Libreoffice, laakiin dhammaantood hal mar; ama waa inaan mid mid u sameeyaa. Kadibna isla waxbaa igu dhacaya aniga oo leh bogagga aan ugu jeclahay Internet Explorer, waxaan jeclahay 300. Waa inaan dib uga bilaabo Midora ama wax kastoo la yiraahdo. ama waan koobiyeyn karaa oo dhajin karaa. Anigu waxaan ahay cilmi-baare, markaa waa shaqadii 20 sano waxaanan dareemayaa inay igu adkaatay cusboonaysiinta wax walba. Fadlan ii jawaab
Ku jawaab Eva Luz Samperio
Kova 86 dijo
Waad salaaman tahay, runtii waxaan isticmaalaa Linux muddo dhowr sano ah, gaar ahaan debian inkasta oo maalmo ka hor aan ku rakibey os os, waa nidaam hawlgal oo super ah, kama qoomameyn doontid, haddii aad shaki ka qabtana waxaan kugula talinayaa inaad rakibto labada qol, labadaba libreoffice iyo xafiiska khamriga leh, maahan wax cakiran, waxaa jira casharro badan, waxaan si gaar ah u rakibaa xafiiska 2007 maadaama lagu shaqeyn karo silsilad, haddii aad hesho nooc dambe oo aan u baahnayn dhaqaajin way fiicnaan lahayd, anigana waan la kulmay Dhibaatooyinka qaarkood si iswaafajintu u tahay 100%, runtiina qolka keliya ee aan helay ee ku dhowaad gebi ahaanba la jaan qaadaya xafiiska microsoft waa xafiiska kingsoft laakiin daaqadaha, Linux wuxuu wali ku jiraa nooca alfa, laakiin taasi waxay ahaan laheyd talo soo jeedinteyda, salaan iga timid Mexico….
Ku jawaab Cova86
caqabad nelson dijo
salaan diirran waxaan idiinka soo qorayaa dalka Kolombiya waxaanan rabaa in aan u soo bandhigo qaar ka mid ah dhibaatooyinka isbarbar taaga u dhexeeya libreoffice vs msoffice ee la ii soo bandhigayo ee socdaalka dukumiintiyada ay ku jiraan waraaqaha socodka iyo marka aan ka furo xafiiska ms dib ayaa loo qaabeeyaa ama markaan sameeyo. ficilka nuqulka iyo dhajinta xafiiska Libre-ka ayaa igu dheggan isla markaana si la mid ah macruufka aniga ilama shaqeeyo aniga waxaan hayaa ilaa 500 macros si aan ugu haajiro mahadsanid caawimaaddaada maxaa yeelay waxay kuxirantahay tan hoos u dhigista iska caabbinta isbeddelka si bilaash ah software
Ku jawaab Nelson Barrier
Muddo dheer ayaan lajiray dhibaatada iswaafajinta, ma doonayo inaan isticmaalo MSOffice laakiin facu waa waxa kaliya ee ay ogyihiin macalimiinta iyo asxaabtuba (idaha nidaamka).
Waxa ugu dambeeya ee aan maanta isku dayay nooca aan u adeegsado 4.2.4.2 (Ma ogi haddii ay horey ugu laheyd kuwii hore) sidaa darteed waxbadan ama kayar waxa lagu sameeyo LibreOffice looma arko inuu yahay qashin MSOffice waa , ku calaamadee Qalabka> Fursadaha> Xamuul / Keydso> Guud; ikhtiyaar: 1.2 la dheereeyay (qaabka iswaafajinta) waa waxa aniga sida ugu fiican ii shaqeeyay. Tijaabi oo faallo.
Mahadsanid, runtii waxbadan kama aqaano Libreoffice, office, iwm. Ma isticmaalo maalin kasta.
Ku jawaab AMLC
Aad u wanaagsan, su'aashaydu waa sida soo socota, waxaan helay feyl lagu abuuray Excel oo loo qaabeeyey inuu yahay xog ururin xog ururin lagu sameeyo miirayaasha iyo badhamada xulashada badan ee unugyada, iyo dukumiintiga la sheegay markii la furayo xafiiska lacag bixinta ee bilaashka ah Iyagu ma shaqeeyaan ama halkii badhanka xulashada badan uusan ka muuqan Waxaan isku dayay inaan raadiyo waddo aan uga dhigo badhanka xulashada mid shaqeynaya laakiin ma heli karo, ma garanayo sida loo sameeyo waxaanan rabay inaan ka fogaado sameynta dukumiinti cusub maaddaama ay tahay sahan si caddaalad ah u ballaaran oo waqti dheer igu qaadaneyso inaan dib u soo ceshto feylkii horay loogu abuuray heer sare, waan ku faraxsanahay wax ku biirin…
Jawaab Ronald Camacho
Ma ogtahay sababta aysan u fureynin tabka 'CONGIGHURACION tab' ee CFDI INFOOLO BILAASH ah oo ku jira LIBREOFFICE? sharciga aan riixana ma furo mana ka jawaabo
Ku jawaab Alberto Villarreal
Ku darsigaaga ayaa i caawiyay.
Waxaan gebi ahaanba u wareegayaa Linux
Oo sidaas daraaddeed waxaan doonayaa inaan ku sameeyo libreoffice
Waxaan sameeyay isbedelada wayna ii shaqaysaa aniga
Dhibaatooyin ayaan ku qabaa aragtida. 4.2 ee libreoffice, oo ku jira qoraal kasta oo erey abuur ah kuna dhex keydsan, markaan ka shaqeynayo libreoffice waxaan rabaa inaan wax ka beddelo oo aan keydiyo anigoo ku hayanaya qaabkii asalka ahaa, oo dhammaantood sida muuqata u oggolaanaya inay sii ahaato mid la duubay, halkan waa layaab markaan ka fur Mar labaad waxba lama keydin, kaliya feylku wuxuu ku sii jiraa qeybta asalka ah ee ereyga ee ma ahan waxaad ku sameyso libreoffice.
Qof ma ii sharixi karaa, ma heli karo macluumaad badan. Intaan akhriyay maahan wax ku habboon in la sameeyo isbeddeladan ama saameyntan. I caawi.
Mid ka mid ah dhibaatooyinka Xafiiska Libre ee deegaanka Linux waa in noocyada iswaafajiya ee ay adeegsadaan Microsoft ay tahay in lagu rakibo Linux, tusaale ahaan Arial iwm. loo yaqaan 'True Type Fonts' (ttf). Xitaa sidaas oo ay tahay, tabsku had iyo jeer wuu beddeli doonaa tanina waxay dhibaysaa isticmaaleha ka soo wareegaya hal mishiin una wareegaya mid kale.
Ku soo jawaab Arnaldo Valdes carrazana
Liiska buuxa ee muraayadaha indhaha Ubuntu
Dhalasho Wacan KZKG ^ Gaara